I-Semalt Expert Kubaluleka kwe-SEO yengingqi
Nayiphi na ishishini lingasebenzisa i-SEO yangaphakathi kwindawo yalo. I-SEO yasekuhlaleni iye yaqhubeka ikhula ukususela ngoqaliso lwe-Fan-based "Pigeon" ehlaziywa yiGoogle ngo-2014. Isiphumo sokuba abo basomashishini baqalisa ukujonga kwi-SEO njengeqhinga loshishino lwabo nangona bengakhange bawucinge njengengqungquthela yasekhaya umkhankaso wabo wokuthengisa. Abo babesebenzisa isicwangciso phambi kokubona ukuhlaziywa njengethuba lokunyusa imizamo yabo.
Isigqibo sokwenza i-SEO sendawo siqondakala njengoko siyaqhubeka sikhula ngokubaluleka.
Nangona kunjalo, akupheli apha njengoko i-SEO yendawo kufuneka iqhube phambili ibe nefuthe ngakumbi kwaye uMichael Brown, enye yeengcali ezikhokelayo Semalt , uchaza apha ukuba kutheni:
I-Google ibathanda amashishini angingqi
Kukho ulungelelwano oluncinane kwiinkampani ezincinci kunye ne-agile ngeenjini ze-Google zophando. Inkampani inamathuba amaninzi kwixesha elidlulileyo, elivela kwimbali yecala, okanye igunya layo. Nangona kunjalo, i-Google nayo inomdla ekunikezeni abantu into abayifunayo, kungenxa yoko babonisa ezinye zeempawu ezincinci nezinye ezithandwayo.
Esinye isizathu sokuba banokwenza oku kukukunceda abanikazi bamashishini abancinci abanezibonelelo ezincinci, bahluke ngaphezulu. Kukho izixhobo ezikhululekile ezibonelelwa yiGoogle ezifana neWebmaster, kunye ne-Analytics, ngenjongo yokubanceda ukuba bandise ukubonakala kwabo kwi-inthanethi.
Iziphumo ezingakumbi ezizimeleyo
I-Google iyakuthanda ukuphucula amava abo abathengi ngokuzikhethela iinkonzo zayo. Kukho ukukhawulelwa kwamanje kwizihlungi zokusesha ezicwangcisiweyo kunye nezilungelelaniso, kodwa "
Ukunyuka kwezixhobo eziphathekayo neziphathekayo
Abantu basebenzisa amadivaysi eselula ukukhangela i-intanethi kwaye ngelixa behamba rhoqo. Inombolo iyaqhubeka ikhula ngonyaka, kunye neenkampani zedijithali eziphuhlisa izixhobo ezininzi zokuguga, inani lokutshitshiswa lisetyenziselwe ukwandisa ngokuzenzekelayo. Isiphumo siya kuba ukuba uphando olusekelwe ekufuphi luya kuba luhambelana nokukhangela kwendawo esebenzisa indawo ekhethekileyo. Ezi zixhobo ezinxibekayo ziza kubuyisa iziphumo ezichanekileyo kunendawo yomsebenzisi.
Kukho izigidi zeesayithi ezintsha ezenziwe ngonyaka. Igalelo elinalo kumashishini akhona kukuba ukwandisa ukhuphiswano. Ngoko ke, ezinye zewebhusayithi ezinezinga eliphezulu kwiziphumo zophando zingase zinciphise kakhulu. Iinkampani ezinqwenela ukuhlawulela imisebenzi yazo zifuna ukujolisa kumancinci athengisa iimveliso zeemarike ukufezekisa ukubonakala okufunekayo. Indawo yasekuhlaleni I-SEO yokuthengisa yindlela yokuhamba xa ukhuphiswano luqala ukuphazamisa imisebenzi kwimisebenzi yenkampani
Ukuqalisa ngekhankaso ye-SEO
Ukulungiswa kwendawo yokucoca. Qinisekisa ukuba iqulethe zonke iinkcukacha ezibalulekileyo ukukhusela impikiswano evela kwimithombo emibini.
Umxholo wendawo kunye nokwakha ubudlelwane. Ukuphucula zonke izixhumanisi kunye nomxholo wokuposa ochaphazelekayo kubantu abajoliswe kuwo.
Ukuhlaziywa kwendawo kunye nolawulo. Qinisekisa abathengi ukuba bathumele ukuhlolwa okulungileyo kwisayithi.
Emva kokuba oku kuzalisekile, umntu makenze amalungiselelo okuba nesicwangciso esivumelanayo nesigxinayo, kunye neenkqubo zokubeka esweni ukuba iinjongo zihlawulwe.